घरमा धनको वर्षा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यहाँ बताइएको उपाय अपनाउनुस् – Karnalikhabar
घरमा धनको वर्षा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यहाँ बताइएको उपाय अपनाउनुस्
काठमाडौं, — जोकोहीलाई पनि धन आवश्यक हुन्छ । धन भए त घरपरिवारमा सुख र खुशियाली हुन्छ । देवी महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गराएमा घरमा सुख समृद्धि आउँछ । यहाँ बताइएका उपाय अपनाउनुभयो भने लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ । महिलाहरूले दिनदिनै यो उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
घरमा बिहान सबभन्दा पहिले उठ्ने महिलाले यो उपाय गरेको राम्रो हुन्छ । ती महिलाले बिहानै घर सफा गर्नुपर्छ । उपाय गर्नुभन्दा पहिले महिलाले नित्यकर्म गरेर नुहाउनुपर्छ । त्यसपछि घरको मुख्य द्वारमा दिनदिनै तामाको लोटाले छर्किनुपर्छ ।
जलमा तुलसीको पात हाल्नुस् अनि यिनै पातले घरको मुख्य द्वारमा छर्किनुस् । ढोकामा जल छर्किंदा महालक्ष्मीका मन्त्रहरूको पाठ गर्नुपर्छ । मन्त्र पढ्न आउँदैन भने लक्ष्मीको ध्यान गर्नुस् ।
मन्त्र यो हो : ऊँ महालक्ष्म्यै नमः । ऊँ श्रीं श्रियै नमः ।
यो उपाय अपनाएसँगै हरेक शुक्रवार महालक्ष्मीको पूजा गर्नुस् । पूजामा कमलको फूल, चन्दन, केसर, पहेंलो वस्त्र, सुगन्ध र मिठाइ अर्पण गर्नुस् । पूजा गरेपछि घरको पवित्र र एकान्त स्थानमा बसेर लक्ष्मी मन्त्र १०८ चोटि जप्नुस् । मन्त्र जप्नका लागि कमलगट्टाको माला प्रयोग गर्नुस् ।
अघिल्लो - जलेका गाईको शान्तिका लागि श्रीमद्भागवत
आलेख : थपिएको समयमा पनि नारायणगढ–मुग्लिन सडक सम्पन्न नहुने पक्का - पछिल्लो